Tottenham Oo Aan Mar Kaliya Laga Badin Champions League Heerka Hormadda 1 aad
HomeAfricaTottenham Oo Aan Mar Kaliya Laga Badin Champions League Heerka Hormadda 1 aad
Fernando Llorente ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horeeyey ee uu u saxeexo Tottenham, 17 ciyaarood oo uu u saftay, kulan kooxda tabobare Mauricio Pochettino ku soo khatintay guushii u dambeysay hirdanka Champions League ee Group H kuna tuntay kooxda Apoel.
Spurs oo kulankan Arbacadii ka horba booskeeda sii xaqiijisatay, ayuu tabobare Pochettino sababtaas la ajligeed xulashadiisa ku daray xidigo aan safka hore awal ugu jiri jirin.
Llorente, oo ay xagaagan ka soo iibsadeen Swansea, ayaa kamid ahaa, laacibiinta safka hore lagu soo daray ciyaartan, waxaase u suurto gashay inuu gool dhalinta u daah furo kooxdiisa..
Wuxuu ahaa gool ay u qalantay Spurs kadib maamulka ciyaarta iyo awooda gacanta sare oo ay bilowgiiba shookaanta u qabatay, iyadoo Georges-Kevin N’Koudou dirqi lagaga bad-baadiyey gool uu bilowgiiba dhalin lahaa.
Son Heung-min ayaa ku daray goolka labaad intii aan la gaadhin nasashada qaybta koobaad, kadib markii ay dhiibo oo dhaqaaq xerada ganaaxa dhexdeeda isku dhiib-dhiibteen isaga iyo Llorente.
Kooxda reer Cyprus ee Apoel, oo guul kaliya u baahnayd si ay boos uga hesho kooxaha ku dhacaya tartanka Europa League ayna uga cidhiidhsato naadiga Borussia Dortmund, oo ay isku haysteen, Ayaan abuurin fursadihii loo baahnaa intii ciyaartu socotay.
Waxaase gabal baasi u sii dumay markii N’Koudou uu goolkii saddexaad u raaciyey ku dhawaad dhamaadkii ciyaarta.
Tottenham, oo noqotay naadiga dhibcaha ugu badan sanadkan ugu gudubtay wareega 16 dhamaadka ee Champions League heerkiisa groups ka, ayaa iyadoo aan mar kaliya guuldaro arag ku baxday 16 dhibcood.